Mahaliana momba an'i Shina ~ Journey-Assist - Ny zavatra tokony hatao any Sina
Pejy fandraisana » Eran-tany / Faritra » Asia » Shina
Hihaona any Shina
Shina dia firenena iray izay samy manana ny fahafahana hahatsapa ho "kitapom-bola" ny tsirairay. Ny mpizahantany iray, na dia miaraka amin'ny teti-bola tsotsotra aza dia afaka manome vola eto. Ohatra, azonao jerena eto ny vidin'ny "Rolex" amin'ny vidiny $ 10 sy ny pataloha jeans "Levis" amin'ny $ 12, tsy misy marika "Natao tany Chine". Ary avy eo amin'ny fahafaham-po dia mankany amin'ny iray amin'ireo toeram-pitsaboana ara-pahasalamana, ohatra, momba ny. Hainan, mba hahatakaranao fa any Chine dia afaka mamonjy zavatra be loatra amin'ny fahasalamanao manokana ianao nefa tsy manimba an'io fahasalamana io mihitsy.
Toetrandro sy vanim-potoana any Chine
Ny toetrandro amin'ny faritra samihafa ao amin'ity firenena lehibe ity, izay mivelatra mihoatra ny zona 3 marimarina, miovaova tanteraka, miainga avy amin'ny kaontinanta miadana (fahavaratra mafana sy ny haintany mafana) any amin'ny faritra andrefana sy avaratr'i Sina, ary miafara amin'ny subtropika eo afovoany sy ny mononika tropikaly any atsimo sy ny nosy sinoa. Ny hamandoana avo be dia be ny mampiavaka ny faritra maro amin'ny faritra afovoany sy atsimo amin'ny fahavaratra.
Ny fotoana tsara indrindra fitsangatsanganana any Shina dia azo raisina ho tara lohataona (Mey sy tapany faharoa amin'ny volana aprily). Ny volana septambra sy Oktobra dia mety tsara amin'ny dia toy izao. Ny atsimo atsinanan'i Chine dia tsidihina tsara indrindra amin'ny volana novambra sy desambra, ary eo ho eo. Hainan mahatsiaro tena mandritra ny herintaona i Hainan.
Toetrandro marina any Sina
Ny widget dia mandeha. Safidio ny sosona mahaliana anao (kotrokorana, rivotra, onja, mari-pana, sns ..), dia ho hitanao ny toe-javatra misy ankehitriny sy ny vinavina mandritra ny andro maromaro.
Fadin-tseranana any Sina
6 yuan ny vola avo indrindra amin'ny vola Shinoa raha haondrana.
Ny vola vahiny dia azo haondrana sy aondrana amin'ny vola rehetra.
Afaka manafatra sy manondrana sigara hatramin'ny 400 ianao, na sigara hatramin'ny 100, na mihoatra ny 500 grama feno paraky.
1,5 litatra ny haben'ny zava-pisotro misy alikaola indrindra ho an'ny fanafarana maimaim-poana sy ny fanondranana.
Fitaovana elektrika ao an-tokantrano sy kojakojan-tokantrano hafa azo aondrana sy manafatra adidy maimaim-poana mandritra ny 2 yuan.
Ny fanafarana maimaim-poana sy ny fanondranana entana manokana, rakitsary fandraisam-peo, fakan-tsary, fakantsary finday, solosaina tsy mihoatra ny 1 isaky ny olona ary amin'ny vidiny hatramin'ny 5 yuan.
Fitaterana any Chine
Noho ny haben'ny haben'i Shina dia tsara kokoa ny mitsangatsangana eo anelanelan'ny tanàna izay mifanalavitra amin'ny alàlan'ny fiaramanidina. Amin'ity firenena ity, misy zotram-piaramanidina 7 (nasionaly sy isam-paritra) ary fiaramanidina lafo andrana lafo, ny vidin'ny tapakila izay manomboka amin'ny $ 15. Matetika ny sidina no ajanona ary esorina, ka alohan'ny hahatongavany eo amin'ny seranam-piaramanidina dia mila azonao antoka tsara momba ny toe-javatra hiainganana.
Ny lalamby. Lamasinina any Chine
Ny làlamby hafa ihany koa safidy mora azo. Ny tambazotra lalamby ao Shina dia novolavolaina tsara. Isan'ireo fiaran-dalamby dia misy fiaran-dalamby haingam-pandeha (mitondra ny hafainganam-pandeha hatramin'ny 350 km / h), ary koa lamasinina mora. Any amin'ny toeram-piantsonana dia ambany be ny haavon'ny serivisy. Na izany aza, misy birao manokana ho an'ny vahiny, mamela anao hividy tapakila amin'ny lamasinina nefa tsy misy filaharana. Fa tsy maintsy lazaiko kosa fa matetika ireo goavana eto ary ny mihetsika miadana dia mandeha miadana. Mazava ho azy fa ny vatam-bola toy izany dia mampiasa sisiny sasany.
Bus any China
Hita any Chine koa ny lalan'ny bus bus. Mazava ho azy fa ambany ny vidiny noho ny fiaran-dalamby. Na izany aza, miaraka amin'ny mety faran'izay mafy, dia mila mitaingina fiara fitaterana efa zatra ianao, amin'ny hafanana, tsy misy fantsom-pananana an-trano ao amin'ny trano fatoriana, voahodidin'ny tantsaha sinoa izay saika mifanipaka. Na izany aza, amin'ny maha-fitsipika azy, misy fiara vaovao sy mahasalama mihazakazaka eo anelanelan'ny tanàna lehibe.
Metro ao Shina
Ao amin'ireo tanànan'ny sinoa, ny fitateram-bahoaka dia tsy maharaka ny vesatry ny mpandeha maro, izay matetika no be olona. Any amin'ny tanàna 6 any Sina (Beijing, Guangzhou, Shanghai, Hong Kong, Tianjin ary Shenzhen) dia misy lalamby. Ao amin'ireo tanàna ireo dia misy troliera sy fiara fitateram-bahoaka. Ny vidin'ny dia iray amin'ny fifamoivoizana an-tserasera dia 1-3 yuan. Mandritra izany fotoana izany, ny fandoavam-bola dia matetika tsy azo atao afa-tsy amin'ny vola, na dia amin'ny carte magnetika lehibe indrindra, toa an'i Troika any Moskoa aza dia ampiasaina. Miaraka amin'ireto karatra ireto dia afaka mitaingina karazana fitaterana monisipaly (metro, bus trolique ary bus) ianao.
Taxi any China
Mazava ho azy fa misy ny taxi any Chine. Amin'ny fiara rehetra misy mpifaninana dia tsy afaka manahy momba izany ianao.
Mpitaingina bisikileta any Chine
Misy koa ny solosain-tsolika any amin'ny tanànan'ny firenena. Rickshaw dia bisikileta misy kodiarana 3 misy mpamily ary seza seza ho an'ny mpandeha. Ny vidin'izy ireo dia lafo lavitra noho ny an'ny taxi, saingy maro no manaiky fa mandoa vola bebe kokoa noho ny loko. Ankoatra izany, ny rickshaw dia afaka mandeha manodidina ny voatavo.
Ny saran-dàlana dia voafaritra, ankoatry ny halaviran'ny mpandeha ihany koa. Tsy misy mpanohitra ny rickshaw, ka mifampidinika am-bava ny vidiny alohan'ny hisakanana azy.
Fitsipika momba ny fiarovana any Sina
Tsy misy vaksiny takina alohan'ny handehanana any Sina. Tsy misy atahorana ara-pitsaboana manokana. Raha ny momba ny asan-jiolahy, ny vono olona, ​​ny halatra, sns. Ohatra, ny tetika fanaovana hosoka malaza dia fanaovana lanonana dite.
Voalohany, tovovavy iray na bandy manintona izay manao endrika tsara dia manatona ny vahiny iray miaraka amin'ny tolotra fizahan-tanàna kely sy fampisehoana trano fisakafoanana tsara. Ao amin'ny trano fisakafoanana no itondran'izy ireo ny mpizahatany, na izany aza, izy ireo dia mitondra volavolan-dalàna lehibe any aminy, ary ny "torolàlana" amin'izao fotoana izao dia nanjavona amin'ny lalana tsy fantatra.
Tian'izy ireo ihany koa ny hamitahana mpizahatany ao amin'ny tempoly sinoa. Ny vahiny iray dia azo atolotra mba hanao faniriana, ary ny fampiharana azy handoroana ditin-kazo manitra.
Ary avy eo ny mpitondra fivavahana dia manambara fa voadidy io fombafomba io, ary indraindray mitaky an'arivony ny Yuan ho azy. Amin'ity toe-javatra ity dia afaka miantso polisy fotsiny ianao (na mandrahona ny hiantso dieny izao). Satria tokoa, araka ny lalàna, ny tempoly dia tsy mahazo mitaky vola amin'ny fitsidihana sy ny fombafomba. An-tsitrapo ny fanomezana.
Raha nihaona ny moanina ianao izay nanolotra hividy sary hoso-doko taloha na asa tanana hafa amin'ny vidiny mahaliana, tsy maninona na hividy zavatra. Eny tokoa, amin'ny toe-javatra toy izany, tsy isalasalana fa tsy mpitana ny trangan-javatra ianao fa mpamitaka ary ireo "antikristy" nataony "noforonina" dia noforonina omaly ary teo amin'ny lohaliny.
Mpanao vola any Chine
Ny vola sandoka dia fahita any Sina. Matetika, ny vahiny no "voatsindrona" amin'ny mpamily fiarakaretsaka. Ny mpamily fiarakaretsaka iray hafa dia afaka manolo ny volanao amin'ny volanao, ary avy eo dia manambara fa ianao no nanome azy io banknote sandoka io. Raha azonao antoka fa tena nisy ny volavolan-dalàna, dia tokony handrahona hiantso ny polisy fotsiny ianao.
Ahoana no fomba hamantarana yuan sandoka
Ny filohan'ny Mao amin'ny marika dia tokony ho hita mazava tsara amin'ny hazavana
Ny volon-dohan'i Chairman Mao dia tokony hosoratana amin'ny resaka hikasika. Toa ny volo tena izy. Amin'ny volavolan-dalàna sandoka, tsy hisy ny vokatr'izany.
Raha mijery ny volavolan-dalàna ao anaty fiaramanidina ianao (ny tavan'ny faran'ny volavolan-dalàna dia mijery anao), dia hisy sarina manga hipoitra manodidina ny sandan'ny volan'ny volavolan-dalàna. amin'ny volavolan-dalàna sandoka, tsy hisy akony izany.
Fiantsenana ao Shina
Any Shina, maro ny souvenir amidy no amidy. Marina fa manana kalitao ny ankamaroan'izy ireo. Atolotra eny amin'ny zoron-trano rehetra ny porselika, sakay. Ming porselika dia hita ao amin'ny magazay manokana na salon antikô. Ny sary hosodoko sinoa kilasy sy ny dika mitovy amin'ireo sangan'asa eran-tany amin'ny vidiny mora amidy eo. Ao amin'ny Suzhou sy Hangzhou dia mahita paty sy dite izay tena tsara kalitao. Tsara homarihina fa vokatra jade (peratra, sary sokitra sy ny maro hafa), perla sy firavaka volafotsy, kosmetika voajanahary sinoa, karipetra.
Ao amin'ny fivarotana, ny vidiny dia, mazava ho azy, raikitra fa any amin'ny baozy, ny fahazoana entana dia tena mety ary saika mandidy, toy ny any an-kafa any Azia. Ny ankamaroan'ny fivarotana dia misokatra manomboka amin'ny 9 ka hatramin'ny 21. Boky misokatra amin'ny maraim-be maraina (ny sasany ao amin'ny 4 overnemanta amin'ny ankapobeny). Mandritra ny mitataovovonana no mandeha matetika.
Ny sakafo sinoa amin'ny ankapobeny dia ahitana ny fomba sy ny fomba amam-panao samy hafa izay samihafa any amin'ny faritra samihafa ao amin'ny firenena. Shina mizara ara-dalàna ny "Chine culinary" 4:
Ho an'ireo tia mpankafy 🙂. Manana tsiro mamirapiratra izy io, be dia be ny hanitra sy ny hanitra. Ampiarahina am-pototra ny tongolo gasy, ny dipoavatra mena ary ny karazan'akondro hafa. Hetsika sesame, voanjo, ginseng.
Sakafo avy any amin'ny faritany Shandong amoron-tsiraka. Ho an'ny mpitia hazan-dranomasina! Koa, legioma sy voamadinika dia ampiasaina mavitrika amin'ny famoronana.
Shandong Cuisine sakafo
Ny sakafo saka ny faritany amin'ny anarana mitovy, izay nitaona ny mpiara-monina amin'i Japon. Ao anatin'izany, ny fomba fanao dia omena ireo fomba fanodinana ireo vokatra toy ny fandrendrehana, fandrahoan-tsakafo, fikosohana. Ho fanampin'ny hazan-dranomasina sy legioma mahazatra, ny holatra ary ny zana-kavina volom-borona tanora no mavitrika.
Sakafo Fujian Masirasira
Guangdong (tsapan'ny teny Kantone)
Ny sakaosy kantanianina dia angamba ny sakafo sinoa malaza indrindra any Shina sy ny any ivelany. Efa mahazatra ny mampiasa karazan-kena misy sakafo, anisan'izany ny taova ao anaty, ny menarana, ny tsiranoka ary ny leoparda. Ny an'ny zanak'ondry sy ny osy dia an'ny zanak'osy.
Ny sakafo mahazatra indrindra dia vary, soja, legioma. Marihina fa tena ny mofomamy sinoa. Any Chine dia feno lovia koba be dia be no mitovitovy, mitovy amin'ny kitron-taolana sy dumplings, izay malaza amin'ny firenena CIS, toy ny wonton, baozi, dim sum, jiaozi. Momba ny be noho ny mampientam-po kokoa, ny olona iray dia afaka manamarika ny felam-bary nendasina, lasopy avy amin'ny akanim-borona, ny lunhudou (lovia bibilava sy hena saka). Ny labiera sinoa be dia be vita amin'ny vary - lafo, fa avo lenta kosa.
Vola any Sina. Fifanakalozana fifanakalozana. mpanova
Ny vola sandan'ny Sina dia yuan. 1 yuan zaraina ho 100 fen. Ny fifanakalozana fifanakalozana ara-dalàna dia azo atao any amin'ny banky, hotely, seranam-piaramanidina, ny gara, ary amin'ireo toeram-pivarotana lehibe. Tsy maintsy atolotrao ilay varotra pasipaoronao ao amin'ilay mpivarotra.
Coins of China (Fyn)
Ny dolara amerikana sy ny amerikana dia ekena ho takalon'ny toerana rehetra. Ny rubles rosiana dia ekena amin'ny toerana maro ihany koa, saingy ny tahan'ny hafa dia matetika tsy manimba. Ny fandoavam-bola any Shina dia tsy azo atao afa-tsy ao amin'ny RMB, ary saika vola be dia tsy azo atao ny mandoa vola.
Mpanova Vola Ny tahan'ny ankehitriny dia RMB
Ny converter-kajy dia mampiasa ny tahan'ny fifanakalozana RMB ankehitriny. Azonao atao koa ny misafidy vola hafa hiova fo.
Karatra plastika Visa sy MasterCard any Sina (karatra banky)
Miaraka amin'ny karatra banky any Shina, tsy dia tsotra loatra ireo zavatra ireo. Ny karatra kilasy Visa sy MasterCard izay zatra ny olon-drehetra dia ekena ao amin'ny toeram-pivarotana lehibe ihany, hotely lehibe ary seranam-piaramanidina. Ao amin'ny fivarotana mahazatra, vola sy famindrana ihany amin'ny alàlan'ireo rafitra fandoavam-bola eo an-toerana no ekena: WeChat Pay sy Alipay.
Misy ireo ATM ao Shina ary azo atao ny mampandoa vola ny Visa sy ny MasterCard anao. Mba hanaovana izany, dia ilaina ny mampiasa ATM amin'ny banky. Ny fetra fandroahana fenitra dia 3000 yuan (eo ho eo amin'ny 420 USD). ATM koa dia mivoaka an-tsitrapo RMB fotsiny. Tsy zatra ny mandoa vola hafa any Shina.
Fety amoron-dranomasina any Sina. Nosy Hainan
Firenena mahavariana. Toa manana ny zava-drehetra! 🙂